Kusukela kwesobunxele uSolwazi Glen Snedden, uMnu Tim Velthuysen, uSolwazi Mike Brooks, uMnu Humbulani Mudau (woMnyango wezeSayensi), noDkt Jean Pitot nethimba lase-ASReG.
I-UKZN inika abafundi abenza iziqu zokuqala ithuba lokufundela ubunjiniyela kwezerokhethi onyakeni wesine wezifundo zabo ngokwenza isifundo esisha i-rocket propulsion.
Lesi sifundo esikhethwayo sithinta izihloko ezifana ne-rocket engine thermodynamics, i-nozzles, i-thurst chamber design, ne-orbital mechanics.
‘Izifundo ezintsha lezi eNingizimu Afrika,’ kusho uMholi weziFundo zobuNjiniyela beMishini e-UKZN, uSolwazi Mike Brooks. ‘I-UKZN kuphela enesifundo se-rocket propulsion ezingeni leziqu zokuqala, kanti abafundi abenza lezi zifundo bathanda ubunjiniyela be-aerospace.’
Umkhakha wezobuNjiniyela bemishini eNyuvesi ikhaya kwiqembu labacwaningi elikhulu kakhulu kwezama-rocket propulsion e-Africa. I-Aerospace Systems Research Group (i-ASReG) yenza umsebenzi oseqophelweni eliphezulu ezindimeni ze-hybrid nezama-liquid rocket engine design, i-aerostructure development, i-launch operations, ne-engine testing.
I-ASReG isanda kuthola izigidi zamarandi eziyi-15 zosizo lwemali eMnyangweni wezeSayensi ngomsebenzi wayo ezinhlelweni ze-SAFFIRE ne-Phoenix.
Uhlelo lwe-SAFFIRE luhlose ukusungula i-commercial liquid rocket engine yokuqala eNingizimu Afrika ezokwenza ama-microsatallites akwazi ukusukela eNingizimu Afrika. Uhlelo i-Phoenix lugxile ukuthuthukisa ama-sub-orbital rockets ekuhloleni ubuchwepheshe, kanti i-ASReG ibukela kwi-‘NewSpace’, okuyiyona eyivulandlela kumarokhethi amasha, angabizi azimele ashintsha indima yokundiza.
‘Eminyakeni eyishumi edlule ama-satellite asenamandla kakhulu kodwa futhi asemancane,’ kusho u-Brooks.
‘Loku kwenze kwaba lula ukwenza amarokhethi amancane nashibhile ukuthi aphokophele emkhathini. Siphila esikhathi esisha sezasemkhathini, kanti sibona ithuba lokukhangisa ngemikhiqizo yaseNingizimu Afrika ingene endimeni, nayo iqale izinhlelo zokundiza zayo nezezwekazi.’
I-ASReG ixhasa abafundi abenza iziqu zokuqala ezingama-25 nasebeneziqu abasebenza kumaphrojekthi aphathelene namarokhethi, okukhona kuzona eze-MScEng nabafundi abenza i-PhD. Amaphrojekthi afaka ucwaningo kweze-propellant pump design, i-rocket engine chambers, i-sounding rocket motor ne-aerostructure design, i-launch operations, nokuthuthukiwa kwezindawo zokuhlola injini.
‘Sekuphele iminyaka eyishumi yaba khona i-ASReG kanti ngokukhula kwayo, ishintshe indlela ubuchwepheshe bokuthuthukisa i-rocket propulision nabantu abakule ndima okungenza ukuthi kungeneke ekundizeni emkhathini eNingizimu Afrika nase-Afrika yonkana,’ kusho uMholi we-ASReG, uDkt Jean Pitot.
‘Siyaziqhenya ngezinto esizizuzile kwezobuchwepheshe kulolu hambo, kanti sijabule kakhulu ngokuthi ikusasa lisiphatheleni. Unyaka wezi-2020 kuzoba ngunyaka omkhulu kwi-ASReG njengoba sihlose ukuhlola okokuqala i-liquid rocket engine eyenziwe ekhaya nokundizisa ama-hybrid sounding rockets amabili e-Denel Overberg Test Range ngasekupheleni konyaka.’
Ngale komsebenzi wayo wocwaningo, i-ASReG igxile ekuthuthukiseni onjiniyela basemkhathini. Abafundi abaningi abenza ucwaningo baxhaswe ngabantu abanjengoMnyango wezeSayensi, i-Armscor, ne-South African Space Agency (i-SANSA). Abaqede lezi zifundo bagcine besebenzela izinkampani ezikulo mkhakha ezinjengo-Rheinmetall Denel Munition, i-Denel Dynamics, i-Aerosud, i-Armscor, nezinye izinkampani eziningi zezobuchwepheshe.
Impumelelo ye-ASReG ibe negalelo ohlelweni lobuNjiniyela beMishini, kanti kulo nyaka lo mkhakha uqale ukunika abafundi abenza iziqu zokuqala ithuba lokufundela izifundo zobuNjiniyela berokhethi onyakeni wesine.
Isithombe: ngu-Asok Rajh